Dowladaha dhaqaalaha shirka bixiya oo kulan iskugu yimid magaalad Nairobi
Soomaalida ku sugan xunta Embagathi oo loogu baaqay in ay ka guuraan
Shirka Kenya: Dhibaato ka taagan qaybsiga baarlamaaka ee beelaha
Dowlaha bixiya dhaqaalaha shirka dib u heshiisiinta ayaa maanta (June 8) shir iskugu yimid safaarada talyaaniga ee magaalada Nairobi.
kulankaan oo ahaa mid qaas ah oo ay albaabadu xirnaayen waxaa ay sheegeen in waxa ka soo baxa iyagoo qoraal ah barri loo gudbin doono IGAD,iyadoo arrinta ugu wayni ay tahay dhaqaalaha ay bixiyen dowladahan tan iyo intii uu bilowday shirka dib u heshiisiinta soomaalida sanadkii 2002-da,iyo wali daymaha lagu sheeganayo ergada ku sugan hotelada iyadoo kii ugu dambeyay maanta ay soo sheegteen xarunta ugu wayn ee ay ergada ugu badan dagan yihiin ee KICC (Embagathi)
beesha caalamka ayaa waxaa ka muuqda caajiska dhinaca dhaqaalaha ah taasoo ka dhalatay natiijaa la,aanta shirka iyo khliaafaad u dhexeeyay wadamada safka hore ee IGAD,beesha caalamkuna ay xiligan aad ula aad ula yaaban yihiin dhaqaalaha ay bixinayaan iyo daymaha soomaalida lagu sheeganayo ee hotelada looga saarayo
kulankan ayaa la saadaalinayaa in go,aamo wax ku ool ahi ay ka soo baxaan iyadoo beesha caalamkuna ay markan talaabo adag qaadi doonaan kuna wajahan dhaqaalaha shirka.
Sidoo kale gudoomiyaha ururka jaamacada carabta oo ka qayba galayay xafladii heshiiskii ay suudaan ku gaareen magaalada naivasha oo lagu qabtay madaxtooya kenya ayaa sheegay in jaamacada carabtu ay bixiso dhaqaalaha shirka qayb ka mid ayna sii wadayaan ilaa inta xal laga helayo isagoo ugu baaqay hogaamiyaasha soomaalidana in ay ilaaliyaan mas,uuliyada shacabkooda ka saaran.
Dhinaca kale warqad qoraal ah oo xalay ka soo baxday maamulka Embagathi ee ay dagan yihiin ergada soomaaliyeed ayaa lagu wargaliyay in ergadaasi ay ka guuraan saakay.
Sababta keentay in xiligan oo uu shirku ku jiro wajigii 3aad ergada loo saaro banaanka ayaa ka dhalatay markii ay maamulku ka cawdeen xaga qarashka.
Arrintan oo aan ka wareystay qaar ka mid ah ergada ayaa ii sheegay in aysan ka guurayn illaa boorsooyinkooda banaanka loo saaro. ergada ayaa ku jira xili ay si wayn iskugu diyaarinayaan ka mid noqoshada xubnaha baarlamaanka.
Hogaamiyaasha siyaasada oo aan qaarkood arrintan wax ka waydiiyay ayaa ii sheegay in aysan ka hadli karin kuna tilmamay mid dhaqaale oo u dhaxaysa IGAD iyo IPF, balse ay ka warsugayaan wax ay maamulka IGAD ka qabtaan iyagoo caawa la filayo in ay kulan arrintan kala yeeshaan maamulka xaruntaasi.
Dhibaatada gurya ka saarida iyo u hanjabida ergada ayaa noqatay mid soo noqnoqata iyadoo dhawaan wasiirka amaanka ee dowlada kenya Mr.Christian Mwangala uu sheegay ku soo badashada ergada dalka kenya in ay wax u dhimi karto amaanka iyo xasilonida dalka iyadoo ay dadkuna si wayn xiligan u joogaan goobaha shirarka iyagoo quudarayna in ay ka helaan kursi baarlamaanka.
Dhinaca kale waxa jira dhibaato ka taagan qaybsiga baarlamaaka ee beelaha iyadoo shirarka ay isku yimadaan maalin walba beeluhu uu ku dhamaado guul daro iyo fashilaad taasoo ka dhalatay is fahamka ugaasyada beelaha iyo siyasiyiinta oo aan wanaagsanayn.
Gudiga fududeynta ayaa ka cabanaya in aysan wali haynin xubihii laga rabay beelaha ee uga qaybgali lahaa guddiga xalinta khilaafaadka,iyadoo dhibka ugu wayna ku sheegay in uu yahay magacyo is burinaya oo ay beeluhu soo wada gubinayaan iyagoo sheegaya in kuwasi aanay ahayn kuwo jira,taasina ay ka dhalatay heshiis la,aanta iyo beelaha oo aan isku niyad wanaagsanay
Ugaasyada beelaha oo aan arrintan wax ka waydiiyay ayaa ku eedeeyanaya siyasiyiinta in ay dhinac u riixayaan odayaasha iyagoo ku tilmaamaya in siyaasada iyo dhaqanku aysan shaqo isku lahayn.